ဂိမ်းကစားရင် မြင်ရတတ်တဲ့ ဂိမ်မာ ၁၄ မျိုး - PX
Super Competitive ဆိုလို့ အထင်မကြီးလိုက်ပါနဲ့၊ သွေးနားထင်ရောက်နေတာမျိုးကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဂိမ်မာမျိုးကို MOBA မှာ အများဆုံးတွေ့ရတတ်ပြီး သူတို့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အနိုင်ရဖို့ပါပဲ။ အဖွဲ့လိုက် Battle ဆိုင်လို့ နိုင်သွားခဲ့ရင် Commend Me လို့ အကောင်းဆုံး Player အဖြစ် ခံယူသလို သေသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရန်သူကို အသေမသတ်ရရင်တော့ ကောင်းကောင်း Blame မှာပါ။
Toxic Player တွေလို ဂိမ်း Throw တာမျိုး မလုပ်တတ်ပေမယ့် နားငြီးအောင် ပြောတာမျိုး၊ တောက်လျှောက် Spoil တာမျိုးလုပ်တတ်တဲ့ ကစားသမားတွေပါ။
Toxic Player/ Cancer
ဒီလိုဂိမ်မာမျိုးပါလာခဲ့ရင် ရှုံးဖို့က ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း လောက်ရှိပါတယ်။ Toxic ၊ Cancer ကစားသမားတွေမှာလည်း ၆ မျိုးလောက် ထပ်ကွဲနေသလို DOTA2နဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် Farm ဖို့လောက်ပဲ အာရုံထားတတ်ပြီး တစ်မြေပုံလုံး ဘာဖြစ်နေလဲတောင် မသိတဲ့ Straight Player လို့ ပြောချင်တာပါ။
ဒီကြားထဲ အသတ်ခံရရင် Teammate (Support) ကို ရွတ်ပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် Invoker လို Hero မျိုးကိုင်လို့ SS ချဖို့ မြေပုံနဲ့ Hero Gank နေတာကိုတောင် မေ့နေတတ်ပါတယ်။
နောက်တစ်မျိုးက Game ကို Throw ပြီဆိုပြီး ဘာ Item မှမထည့် သွားအသေခံတဲ့ Feeder မျိုးတွေ Ancient Level မှာတောင် မြင်ရတတ်ပါတယ်။ ဒီကောင်တွေနဲ့တွေ့ရင် Report (အလုပ်မဖြစ်တဲ့ ပုံသေကားချပ် Even 7.22g Update) ထုဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ Trash Talker ၊ Thrower ၊ Blamer စသဖြင့် ဒီ Category ထဲမှာ ပါဝင်ပြီး Serious မဖြစ်ရင် ကစားနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
အပျော်တမ်း ကစားသမားဆိုပေမယ့် ဂိမ်းအသစ် စမ်းကစားချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပျော်ဆော့ဖို့ တစ်ခါတရံ ပါလာတတ်ပါတယ်။
ဒီလို Player တွေကို Unrank Match တွေမှာတွေ့ရတတ်ပြီး တလွဲတွေ လုပ်တတ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီကောင်တွေမှာ ဂိမ်းအမျိုးစားပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင် (ဒေါ်လာ ၁၀၀ ၊ ၂၀၀ တန်သည်အထိ) တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
2B’s Steam Library
ဥပမာ Clash of Clan ၊ Legends of Zelda (Switch) ကစလို့ Borderlands3၊ Metro Exodus လို အကြမ်းစား AAA ဂိမ်းတွေတောင် ပါတတ်ပါတယ်။
ဒီဂိမ်မာမျိုးကိုတော့ အပြင်မှာတွေ့ရင် သွားနှုတ်ဆက်သင့်ပါတယ်။ စိတ်အားထက်သန်လို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုထဲနဲ့ DOTA ဖြစ်စေ ML ဖြစ်စေ ဘယ်ဂိမ်းမဆို Pro Play ၊ Training စတာတွေ မပါဘဲ Adaptive Learning တစ်ခုထဲနဲ့ ဆော့နိုင်တာကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို Player တွေဟာ များသောအားဖြင့် Game Mechanic နဲ့ Difficulty သဘောတရားတွေ နားလည်သလို DOTA အနေနဲ့ ပြောရရင် Item Build ကအစ Default မသွားတတ်ပါဘူး။ Enemy Hero နဲ့ Team Position ကို ကြည့်ပြီး ဘာ Item သွားရင် ကောင်းမလဲ?
Strategy ဂိမ်းကစားရင်လည်း Defense Line နဲ့ Break Point သဘောတရားတွေကို နားလည်ထားပြီး အံဝင်ခွင်ကျ Timing ညီညီ ကစားနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် Enthusiastic Gamer တွေမှာလည်း ရည်ရွယ်ချက် မတူကြတဲ့အတွက် သူတို့တွေကို Skilled Player လို့ မဆိုလိုပါဘူး။
ဒီလိုဂိမ်မာတွေက Career Life ကို ဂိမ်းကစားတာကနေ ပိုက်ဆံရှာ၊ Tournament ဝင်ပြိုင်ပြီး လက်စွမ်းပြဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ ဂိမ်မာတွေပါ။
Image Credit: Dot eSport
နောက်တမျိုး Single Player ဂိမ်းတွေမှာ Without any Help မပါဘဲ ဂိမ်းရဲ့ အခက်ဆုံး Mode ကို အောင်တာမျိုး၊ Secret Location တွေနဲ့ Achievement ရအောင် ယူနိုင်တာမျိုး၊ ဂိမ်းအသစ်ထွက်လို့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက် ထောက်ပြနိုင်တာမျိုး၊ Walkthrough ကစားတာမျိုး စသဖြင့် ကျွမ်းကျင်ကစားသမား အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုဂိမ်မာတွေနဲ့ တွဲကစားဖူးရင် ဘယ်လောက် လက်ကမြင်းလဲဆိုတာ သိပါလိမ့်မယ်။ MOBA မှာ မမြင်ရတတ်ပေမယ့် Action ဂိမ်းကစားရင် မြင်မြင်သမျှ ဖျက်ဆီးချင်တာမျိုး၊ Squad နဲ့ပဲ ကစားကစား Main Objective ကစားရင်း ဖန်ခွက်က ခွဲလို့ရလား၊ TV ပစ်ကြည့်ရင် ကွဲတတ်လားစသဖြင့် အပျော်လုပ်တာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။
Old-School Gamer/ Retro Gamer
ခေတ်ဟောင်းဂိမ်မာလို့ပဲ ပြောရမလား Graphics လန်ပြန်နေတဲ့ဂိမ်းတွေ ကစားလေ့မရှိဘဲ အရင်တုန်းက လူကြိုက်များခဲ့ဖူးတဲ့ Atari ၊ Nintendo နဲ့ Sega ဂိမ်းဟောင်းလေးတွေ ကစားရနှစ်သက်သူမျိုးတွေပါ။
သူတို့ဆီမှာ ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်က ဂိမ်းစက်တွေရှိတတ်ပြီး တစ်ခါတရံ 6bit ၊ 8bit နဲ့ 2D ရုပ်ထွက် ဂိမ်းတွေကစားရင်း ပျော်ရွင်နေတာမျိုးတောင် ရှိပါတယ်။ (ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အပါဝင်ပါ၊ ခုချိန်ထိ NES ဂိမ်းတွေ ဆော့နေပါသေးတယ်)
Trophy Hunter တွေလည်း အဖျက်သမားတွေနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဂိမ်းကစားဖို့ဝင်လာတာ နိုင်ဖို့ဆိုတာထက် Achievement ရဖို့၊ PUBG မှာဆိုရင် RP တက်ဖို့လာကစားသူလို့ ပြောချင်တာပါ။
သူတို့နဲ့ တွဲကစားရင်တော့ စိတ်ရှည်သည်းခံပေးပြီး တတ်နိုင်သမျှ သူငယ်ချင်းကို ကူညီကစားတာ ပိုကောင်းပါတယ်။
Left4Dead (Image Credit: Destructoid)
အဲသလို မဟုတ်ဘဲ Mulit-player Achievement တွေဖြစ်တဲ့ Tomb Raider ၊ Resident Evil ၊ Left4Dead စသဖြင့် ဂိမ်းတွေမှာလည်း တွေ့ရတတ်ပြီး Player အချင်းချင်း အနှောက်ယှက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တချို့က Main Mission ကို ဦးတည်သွားနေပေမယ့် Trophy စုနေရင် နှောင့်နှေးတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဂိမ်းတွေမှာ Objective ကို I’m for Mission ၊ I’m for Trophy စသဖြင့် ခွဲထည့်ပေးလာပါတယ်။
ဒီလိုဂိမ်မာမျိုးတွေက Single-player ဂိမ်းတွေမှာ တွေ့ရတတ်ပြီး ဂိမ်းကစားရင်း Side Quest နောက်လိုက်တာ၊ Puzzle ဖြေတာမျိုးတွေ သဘောကျလေ့ရှိပါတယ်။
Tomb Raider လို Puzzle နဲ့ Adventure ရောထားတဲ့ ဂိမ်းမျိုးတွေဟာ အသည်းစွဲဖြစ်တတ်ပြီး ဂိမ်းရဲ့ Dynamic Changes ၊ Presentation ကိုတောင် သဘောကျတတ်ပါတယ်။
Social Gamer (ရှာမှရှား)
Social ဂိမ်မာတွေကိုတော့ မြင်ရခဲပါတယ်။ PUBG ပဲကစားကစား၊ DOTA2ပဲ ဆော့ဆော့ တခြား Player တွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေနေတတ်ပြီး ကိုယ်ကိုင်ထားတဲ့ Role အတိုင်း ကစားနိုင်တယ်။
နွေးနွေးထွေးထွေးလည်းရှိတယ်၊ Interactive Communication လည်း ကောင်းတဲ့အတွက် Battle ဆိုင်တိုင်းနိုင်၊ ပစ်တိုင်းအနိုင်ရ စသဖြင့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်စေ၊ ပျက်စေ ပူးပေါင်းကစားနိုင်တဲ့ ဂိမ်မာမျိုးပါ။ စိတ်ချပါ ဒီလို ဂိမ်မာမျိုး Pro Match တွေမှာ တောင်မမြင်ရနိုင်ပါဘူး။
ဒီလိုဂိမ်မာမျိုးဆိုရင်တော့ ဝေါင်ဝေါင်ရှေး၊ ဝေးဝေးရှောင်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဂိမ်းကစားဖို့ ဘာမှသတိမရ၊ အိပ်လည်းမအိပ်၊ အခန်းမှာပဲ အောင်းနေပြီး အပြင်နဲ့လည်း အဆက်သွယ်မလုပ်ဘဲ World of Warcraft ၊ Eve နဲ့ Guild Wars လိုဂိမ်းတွေကို ဖင်မီးခိုးထွက်တဲ့အထိ ကစားရင်း အချိန်ကုန်နေတဲ့ဂိမ်မာမျိုးပါ။
ဂိမ်းကစားရင်း Cheat လုပ်တယ်၊ ခိုးတယ်စသဖြင့် မဟုတ်တာလုပ်တတ်တဲ့ ဂိမ်မာမျိုးဟာ ဘယ်နေရာမှာမှ ဘောင်မဝင်ပါဘူး။ ပျော်စေ၊ ပျက်စေဆိုတာထက် Level တက်ဖို့၊ MMR တင်ဖို့ စသဖြင့် Cheating လုပ်ကစားရင် ဂိမ်မာအချင်းချင်း အထင်သေးခံရသလို လက်ခံမှာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီဂိမ်မာတွေကို DOTA2နဲ့ ဥပမာပေးရရင် Miracle- ၊ Dendi တို့ ကစားတာကြည့်ပြီး Pro လိုလို ဘာလိုလို လုပ်တတ်ပါတယ်။
ဒိအတွက် အကောင်းဆုံး Gaming Gadgets နဲ့ စက်တွေဆင်ပြီးကစား၊ တကယ်တမ်းကျ Control မနိုင်တဲ့အပြင် Battle ဆိုင်ရင် Spell တလွဲထွက်၊ Prediction လည်းမှားတဲ့အတွက် အသေခံဖို့ ပြေးဝင်သွားသလိုမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဒါကို လိုင်း Lag တယ်၊ ဘာညာ Reason ပေးတတ်သလို အတွေ့ကြုံလည်း မရှိတဲ့အတွက် Noob တွေပါလာရင် ရှုံးဖို့ပဲရှိပါတယ်။
Rookie ဆိုရင်တော့ Aim down Sight (ADS) နဲ့ Tactics နားမလည်တာ၊ DOTA ဆိုတာ ဘာမှန်းတောင် မသိဘဲ လာကစားတာမျိုး ပြောချင်တာပါ။ Beginner လို့ပြောချင်ပေမယ့် Private အဆင့်တောင် မရှိတာမလို့ Single Player ဂိမ်းတွေ ကစားတာ ပိုသင့်တော်ပါတယ်။
ကိုယ် အကျွမ်းကျင်ဆုံး အလုပ်ကဘာလဲ? Throw တာလား (နောက်တာပါ) ဥပမာ DOTA အနေနဲ့ ပြောရရင် Core Hero ကစားရတာ ကျွမ်းတယ်၊ နှစ်သက်တယ် ဆိုမယ့် ကိုယ် Specialized ဖြစ်နေတာ Off-lane Role , Support လည်း ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
CS:GO မှာဆိုရင်လည်း Recon လုပ်ရတာ ကျွမ်းတာလား ဒါမှမဟုတ် Fragger ၊ Support ဆော့တဲ့နေရာတွေမှာ ကိုယ့်အရည်ချင်းက အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်နေတာလားဆိုတာ Analysis လုပ်နိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Call of Duty World War II (Image Credit: Sony)
ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ Multi-player ဂိမ်းတွေကို အားသန်တာလား ၊ Mission Hunter ၊ Secrets နဲ့ Easter ရှာတဲ့နေရာမှာ ကျွမ်းတာလား၊ ယုတ်စွအဆုံး “Positive” “Negative” Review (Like IGN) ပြန်ပြောနိုင်တဲ့အထိ အရည်ချင်းရှိတာလားဆိုတာမျိုးအထိ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင် ကိုယ်ကိုတိုင် ဘယ်ဂိမ်မာ အမျိုးစားထဲ ပါဝင်နေပြီလဲဆိုတာ သိပြီထင်ပါတယ်။
44MP အထိ ပါဝင်လာနိုင်တဲ့ Dual Punch Hole Camera